/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/12 ခြေလှမ်းများအတွက် steroids Powder ပေးသွင်း Choose လုပ်နည်း
အပေါ် Posted 04 / 23 / 2019 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
Steroid တစ်မျိုး Powder အကြောင်းကို Verything
2 ။ ဘယ်လို 11 ခြေလှမ်းများအတွက် steroids အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရွေးချယ်ဖို့
အဆင့် 1: စတီရွိုက်အမှုန့်အဘို့နိုင်စွမ်းပေးသွင်းများစာရင်းကိုဖော်ထုတ်ခြင်း
2 အဆင့်: အပေးသွင်း၏ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းဆောင်ရည်စာရင်းစစ်
3 Step: မေးခွန်းတွေမေးတစ်ခုသို့မဟုတ် Self-အကဲဖြတ်မေးခွန်းလွှာထွက်တင်ဆောင်လာသောအားဖြင့် Steroid တစ်မျိုးအမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကရှာဖွေပါ
4 အဆင့်: အစတီရွိုက်အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအပေါ်အထူးအရာပေါ်သုတေသန
အဆင့် 5: ကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့၏တုန့်ပြန်စစ်ကြော
6 Step: အင်တာနက်ကနေပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ, ထောက်ခံစာများနှင့်ဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်ရှာဖွေပါ
7 Step: Steroid တစ်မျိုးမှုန်များ၏စျေးနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ
အဆင့် 8: မှတ်တမ်းတင်ထောက်ခံမှု
9 Step: Delivery နှင့်အထုပ်နည်းလမ်း
ခြေရာကောက်အရေအတွက်: 10 Step
အဆင့် 11: ငွေပေးချေမှုရမည့်နည်းလမ်း
12 Step: ကုမ္ပဏီ၏အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Check
3 ။ ကောက်ချက်
steroids အမှုန့်ပေးသွင်း ပါးစပ်, Injection အပေါင်းတို့နှင့်အခြားပုံစံများ, ဆိုလိုသည်မှာ, စက္ကူသို့မဟုတ်ထုပ်အပါအဝင်သင်တို့ဆီသို့ steroids အမှုန့်အမျိုးမျိုးရောင်းချသူကိုထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ်ပေးသွင်းသူများဖြစ်ကြသည်။ စတော့ရှယ်ယာနှင့်အွန်လိုင်းစတီရွိုက်အမှုန့်ရောင်းကြောင်းဆေးဝါးကုမ္ပဏီများနှင့်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်။
ယနေ့လူများစွာအရင်ကထက် steroids အသုံးပြုနေသည်မရှိမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါပိုပြီး Steroid တစ်မျိုးပေးသွင်းမြင့်ဝယ်လိုအားကိုက်ညီဖို့သူတို့ကိုထောက်ပံ့ဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ သူတို့အများအပြားမဟုတ်ကြပေမယ့်ဒီနေ့ခေတ်သင်တဦးတည်းကောက်နေသည့်အခါအလွန်သတိထားဖြစ်သင့်၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကတဦးတည်းကိုရွေးချယ်ခြင်းအတော်လေးတာဝန်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
သင်ရွေးချယ် steroids အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသင်မသတ်မှတ်ထားသောရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ဖြစ်စေမအပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ သင်ကမှားယွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း select လုပ်, သင်ပိုက်ဆံနှင့်အချိန်တွေအများကြီးဖြုန်းတက်အဆုံးသတ်ပေလိမ့်မည်။
ဘယ်လို 12 ခြေလှမ်းများအတွက် steroids အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရွေးချယ်ဖို့
အမှန်တရားအတွက်အကောင်းဆုံးစတီရွိုက်အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရွေးချယ်ရာတွင်အချိန်-စားသုံးခြင်းနှင့်နည်းနည်းရှုပ်ထွေးပါတယ်။ လူအတော်များများဟာလျော့နည်းဘို့ဖြေရှင်းအဆုံးသတ်ဤအရပ်မှအနုပညာကျွမ်းကျင်မတိုင်မီဆေးလိပ်ဖြတ်။ ယနေ့ကြှနျုပျတို့အကောင်းဆုံးရောင်းသူကိုသိရှိနိုင်ဖို့သုံးစွဲဖို့အဓိကသော့ချက်အချက်များနှင့်ကိရိယာများသို့ငုပ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်ကသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အဆုံး၌သင်တို့အထဲ၌ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သူကအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ select လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းပြီ, ရဲ့စတင်ရန်ပါစေ!
အဆင့် 1: Steroid တစ်မျိုးများအတွက်နိုင်စွမ်းပေးသွင်းများစာရင်းကိုဖော်ထုတ်ခြင်းs အမှုန့်
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်နိုင်သော steroids အမှုန့်ပေးသွင်းများစာရင်းကိုချချပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဘယ်လိုသင့်လျော်ပေးသွင်းသိရန်ရပါသလဲ? အဆိုပါ steroids လယ်ပြင်၌ပေးသွင်းရှာဖွေအများအပြားသတင်းရင်းမြစ်ရှိပါတယ်။ ဥပမာ, သင်အပါအဝင်တစ်ဦးထံမှထင်မြင်ချက်ရှာအံ့သောငှါနိုင်သူကိုကွဲပြားခြားနားသောသက်ဆိုင်သူများရှိပါတယ်;
ထုတ်လုပ်သူ- သင်သင်သိသင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်ကုမ္ပဏီများစာရင်းပေးပို့ဖို့သူတို့ကိုတောင်းဆိုရန်အတွက် Steroid တစ်မျိုးထုတ်လုပ်သူမခေါ်နိုင်ဘူး။ အကျိုးဆက်ကြောင့်သင်နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပျနိုငျသောအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသစ်ကိုရှာဖွေသင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
ပြပွဲများ- ဤသူတို့ထဲကတစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်ကအတူတူပါပဲဧရိယာထဲမှာရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကပေးသွင်းတဲ့စာရင်းအရနိုင်တယ်လို့အလွယ်ကူဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးပြပွဲလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းမပြုမီ, သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုအတွင်းပြုတ်ကျလျက်ရှိသောသူတို့ကိုရှိပါတယ်သေချာဖြစ်မတက်ရောက်ပြသခဲ့သည်များ၏စာရင်းကတဆင့်ကြည့်ရှုကြောင်းအာမခံပါသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအကြံပေး- သင်ဖြစ်ကောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့သောအမျိုးသားရေးသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များကိုဖြတ်ပြီးလာပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောတခုရဲ့ဥပမာစီးပွားကူးသန်း၏အခန်းဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်သွယ်ရေးစာနယ်ဇင်း- အများအားဖြင့်, ကုန်သွယ်ရေးမဂ္ဂဇင်းပေးသွင်း '' ကြော်ငြာများအတွက်အာကာသကိုဆက်ကပ်။ ကျေးဇူးတင်စရာ, သင်ကဆောက်လုပ်ရေးမဂ္ဂဇင်းအတွက် Steroid တစ်မျိုးပေးသွင်းများစာရင်းကိုရှာနေမသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တိကျတဲ့အရောင်းအအတွက်အထူးပြုသောသူတို့ကိုရှိပါတယ်။
Google- ဤသင်ပေးသွင်းသင့်ရဲ့တိကျတဲ့ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့အတိအကျလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်များစွာသောပိုပြီးပေါ်အခြေခံပြီးရနိုင်တဲ့နေရာလေးကိုနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်လိုချင်တဲ့အတိုင်းအတိအကျ Steroid တစ်မျိုးသိလျှင်, သင်တို့အဘို့ရှာဖွေနိုင် "Steroid တစ်မျိုးက x များအတွက်ပေးသွင်း။ "
ဒီကနေ, သင် pickier ဖြစ်နိုင်ပြီးတိုတောင်းတဲ့စာရင်းထဲမှာအတူတက်လာ။ သငျသညျအတိမ်အနက်အတွက်ရှာဖွေစူးစမ်းတန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြပြီးကြောင်းကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌ သာ. သေတ္တာကို tick ထားတဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးရမည်။ တစ်ဦးချင်းစီကသင်နှင့်အတူနေရစ်မည်နည်းပါးလာရွေးချယ်စရာမှာအံ့အားသင့်လိမ့်မည်အားလုံးအလားအလာပေးသွင်းကြည့်ခြင်းအားဖြင့်။
ဘယ်လိုကဒီညာဘက်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖော်ထုတ်အတွက်ကူညီပေးမလဲ ဒါဟာပြိုင်ဆိုင်မှုကိုလျှော့ချရန်ကူညီပေးသည်, သင်ယခုအကောင်းဆုံး steroids အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းကောက်နေတဲ့အဆင့်မြင့်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ဒါ့အပြင်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မချယခုအားထုတ်မှုတွေအများကြီးမလိုအပ်ပေမည်။
စာရင်းစစ်အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်ကိုတွေ့မြင်နှင့်မဆိုအန္တရာယ်များကိုသက်သာစေနိုင်ကြောင်းဖို့လေလံအတွက်အချိန်ကျော်ပေးသွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပါဝငျ။ ဤသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့န်ဆောင်မှုထိန်းသိမ်းထားပြီဟုသူတို့အားရွေးချယ်လုပ်ဆောင်ကြဘူးသောသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါပေးသွင်း '' စွမ်းဆောင်ရည်စာရင်းများစစ်ဆေးခြင်းနှင့်စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးအပြီးရပ်တန့်မထားဘူး, ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသည်။ ကဲ့သို့သောသင်အရမ်းဒုတိယဆင့်ပေးသွင်းစောင့်ကြည့်နေစဉ်တွင် High-အန္တရာယ်ရှိပါတယ်ထင်သောအရေးပါအမှုန့်ပေးသွင်းအပေါ်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအာရုံစိုက်ထားရန်သင်သည်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အားကြီးသောစွမ်းဆောင်ရည်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ခဲ့သူတစ်ဦးကကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရန်သင့်အားချောမွေ့စွာလည်ပတ်ခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းကိုဆက်ကပ်ဖို့ဖွယ်ရှိသည်။ အပျက်သဘောဆောင်သောလမ်းကြောင်းသစ်ရတယ်သူများသည်သင်တစ်ဦးခေါင်းကိုက်ပေးခြင်းတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျတိကျသောသတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. အလားအလာပေးသွင်းအပေါ်အသေးစိတ်ရချင်ပေမည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျပေးသွင်းသငျသညျရှိစေခြင်းငှါမဆိုမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုနိုင်မည့်တစ်ဦး Self-အကဲဖြတ်မေးခွန်းလွှာ generate လိမ့်မည်။ ဒီကတဆင့်, သင်စွမ်းဆောင်ရည်ကွာဟချက်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်အဖြစ်ပေးသွင်းသည်၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးနားလည်ပုံကိုသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
4 Step: ဘာ Steroid တစ်မျိုးအပေါ်သုတေသနs အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအပေါ်အထူးပြုသည်။
မရတိုင်းကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအားလုံးအရောင်းတစ်ပေါက်ပါပဲ။ အခြားသူများကိုချောသူတွေကိုအတွက်အထူးပြုစဉ်တချို့ကကုန်ကြမ်း steroids ရောင်းချလျက်ရှိကြသည်။ အခြားသူများကိုမပြုစေခြင်းငှါအနေဖြင့်အခြားသူများကိုအချို့သော steroids ပေးနိုငျသညျ။ ဒါဟာသိသာထင်ရစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အဘယ်အရာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားထဲသို့သွင်းထားရန်လိုအပ်မှပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့် သိ. ဖြစ်ပါသည်။ သင်မဝယ်ချင်သောအရာကိုဖော်ထုတ်တဲ့အခါမှာတိကျတဲ့ရရန်လိုအပ်သည်။
သငျသညျယခုလုံလောက်စွာသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအပေါ်သုတေသနနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ, ယ့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းချော Deca ရောင်းချဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နှင့်တကွသင်ထောက်ပံ့နိုင်သောမဆိုလိုပါ Deca ကုန်ကြမ်းအမှုန့်.
5 Step: ကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့၏တုန့်ပြန်ဆန်းစစ်ပါ။
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုတယောက်ကိုတယောက်ပေးသွင်းသူထံမှမတူပေမယ့်မရှိမဖြစ်ဝိသေသလက္ခဏာများ, ရှိသမျှမေးမြန်းချက်တုံ့ပြန်ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နှင့်တစ်ဦးလက်လှမ်းမှီဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုရှိခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
အဆိုပါပေးသွင်းပေးသောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသုံးသပ်စိစစ်အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းသည်အင်ဂျင်အတွက်ဆီပိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းမရှိသည့်အခါသင်ကမပါဘဲတစ်ဦးမနှစ်မြို့ဖွယ်အတွေ့အကြုံကိုရှိစေခြင်းငှါနေစဉ်အင်ဂျင်အများဆုံးဖြစ်ကောင်းနိုင်ကို run ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးပေးသွင်းနေတဲ့သနားစရာတုံ့ပြန်မှုရှိပါတယ်လျှင်, သူကသူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအလေးအနက်မဟုတျပါဘူးယျတျောနှငျ့အတူလုပ်ဆောင်လွယ်ကူသောမည်မဟုတ်ပါ။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်ကထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ဤထားရန်ရှိသည် Wee နာရီမှာသူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်လိုအပ်ပါတယ်မယ်လို့တူသောအမှု၌သင်တို့ကိုခံစားကြရသည်။ အဘယ်သူ၏ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ကတုံ့ပြန်တာရှည်ယူမထားဘူးသူ 24 /7ရရှိနိုင်ပါသည်တစ်ဦးပေးသွင်းဘို့သွားပါ။ ဤနည်းသင်အမြဲသင်၏လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌တူညီသောစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ addressing နဲ့သင်၏လိုအပျသောအရာကိုအသိပေး by; အောင်မြင်သောမိတ်ဖက် built လိမ့်မည်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခု, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအမြန်နှင့်တုံ့ပြန်မှုဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုရှိပါတယ်လျှင်ထို့အပြင်ယင်းကုမ္ပဏီ၏ legit ကြောင်းမြင့်မားသောအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ်။ တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကျွမ်းကျင်မှုမကောင်းတဲ့များမှာကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရလျှင်သူတို့တစ်တွေအလားအလာဖောက်သည်သကဲ့သို့သငျဆကျဆံပုံကနေလာမယ့်တရားသူကြီးမှအပေါ်ကိုရွှေ့။
6 Step: အင်တာနက်ကနေပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ, ထောက်ခံစာများနှင့်ဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်ရှာဖွေပါ။
မတူညီသောပေးသွင်း၏ဂုဏ်သတင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းတခါခုန်ကြ၏ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာဖြစ်နိုင်ကြောင်းလိုအပ်သောခြေလှမ်းများတစ်ခုဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းစပေးတဲ့ဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်မှတဆင့်သွားသဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဖောက်သည်ရဲ့ထင်မြင်ချက်သူတို့ကဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူသို့မဟုတ်မစိတ်ကျေနပ်မှုရှိမရှိသင်ပြောပြသည်။
တစ်ဦးပေးသွင်းရဲ့န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များနှင့်ထောက်ခံစာဖို့မရှာသင်သူတို့နှင့်အတူစတင်မည်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်မျှော်လင့်ရာ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့နားလည်မှုရဖို့ကူညီပေးပါမည်။ သင်တို့သည်လည်းထိုသူတို့အပြီး-ရောင်းအားန်ဆောင်မှုဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ steroids ကယ်နှုတ် ယူ. မည်မျှအချိန်ကိုသိနိုငျသညျ။
အားကြီးသောဂုဏ်သတင်းရှိကွောငျးတစ်ဦးကကုမ္ပဏီ၏အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များအဖြစ်၎င်းတို့၏ clients များဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ဖို့အများဆုံးဖွယ်ရှိသည်။ အများအပြားကအနုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်တိုင်ကြားမှုများရှိပါတယ်လျှင်ထို့အပြင်, သို့ဖြစ်လျှင်ဤကုမ္ပဏီ legit မဟုတ်ပါဘူး။ အနည်းငယ်အနုတ်လက္ခဏာသူတွေကိုအဖြစ်မဆိုးဟူမူကား, သင်သည်အဘယ်သို့စစ်ဆေးရှိသည်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းထမြောက်တော်မူပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်စျေးမှကြွလာသောအခါ, နိမ့်ဆုံးတစ်ဦးကိုသင်၏ထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သျောလညျး, သင့်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်မဆိုအကျိုးရှိမပူဇော်စေခြင်းငှါလက်ျာအရေအတွက်နှင့်စျေးပေါမဟုတ် steroids ၏ဖြစ်ကြောင်းအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များရရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးကရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်နိမ့်သောစျေးနှုန်းကုမ္ပဏီ၏သငျသညျဖိနှိပျဖို့ထွက်ရှိပါတယ်ဖြစ်အံ့သောငှါတစ် pointer ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျသောအဆိုပါခံယူချက်ရှိပါက အရည်အသွေးမြင့်၏ steroids နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်ဝယ်, သင်ရတယ်ဈေးအပေါဆုံးရွေးချယ်မှုများထက်နည်းနည်းပိုပါတယ်။ စျေးနှုန်းသော်လည်းသိပ်မြင့်မားတဲ့မဖြစ်သင့်သည်, ဒါဟာအကြိုက်ဖက်သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်သို့ fit သငျ့သညျ။
သငျသညျအသှေးကိုစံချိန်စံညွှန်းများစာရွက်စာတမ်းများတစ်ဦးပေးသွင်းနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါသလား? ဒါဟာမဆိုကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းလျော်သောမှတ်တမ်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်လွှဲသင်နှင့်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအကာအကွယ်ကနေသင့်ကြောင်းအခြေခံစည်းမျဉ်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးပေးသွင်းခိုင်လုံသောလိုင်စင်ရှိပါတယ်ရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းသင်တရားဝင်လုပ်ကိုင်ကြောင်းစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ကူညီပေးသည်။
ထို့အပွငျကကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းလည်ပတ်ပုံကိုတစ်အသေးစိတ်ရုပ်ပုံတည်ဆောက်ကူညီပေးသည်။ မှုအတွက်အလားအလာပေးသွင်းတောင်းဆိုရန်ကောင်းတစ်စိတ်ကူးက ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်အစီရင်ခံစာများထိုကဲ့သို့သော HPLC, NMR, COA (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းလက်မှတ်), နှင့် GMP နဲ့တူအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန် (Good Manufacturing Practices) ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသည်စာရွက်စာတမ်းများကိုသင်ထုတ်လုပ် steroids အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများမှထုတ်လုပ်သောနှင့်ထိန်းချုပ်ထားကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ကူညီပေးသည်။
တစ်ခါတစ်ရံသင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းများ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုအတည်ပြုရန်စက်ရုံသွားရောက်နိုင်ရန်အချိန်ရှိသည်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့ဆိုလျှင်သင်ကသူတို့အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းမိတ္တူပေးပို့ဖို့သူတို့ကိုမမေးနိုင်ဘူး။ အဆိုပါကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဥပဒေနှင့်အလိုက်နာကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသက်သေအထောက်အထားထားရှိခြင်းသည်အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းတစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ဝိသေသဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုထုပ်ပိုးသည်, ဖြန့်ဝေ၏နည်းလမ်းကိုသင်တဦးတည်းအပိုင်းအစထဲမှာ get ရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်။ လူအပေါင်းတို့သည်အချိန် hectic ဖြစ်နှင့်အချိန်-စားသုံးလို့ရပါတယ်အစားထိုးလိုအပျကွောငျးပျက်ယွင်းနေထုတ်ကုန်လက်ခံခြင်း။ ဒါဟာယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အချိန်ပေးပို့ပေါ်တွင်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားသတိပြုပါရန်ကောင်းလှ၏။
တစ်ဦးစတီရွိုက်အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီ, သငျသညျပေးပို့ရက်စွဲများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌မိမိတို့၏အာရုံကိုနှင့်အချိန်မှန်အပေါ်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ လက်ျာဘက်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသင့်ရဲ့အထုပ်စေလွှတ်ကြောင့်တတ်နိုင်သမျှအတိုဆုံးအချိန်အတွင်းမှာသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာမှရောက်ရှိစေရန်ထက်နည်း 24 နာရီကိုယူပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသော steroids အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းထားရှိခြင်းသင်သည်သင်၏စတော့ရှယ်ယာကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်လည်းဖြန့်ဝေနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်မျှော်လင့်ချက်များသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်ကြိမ်စောင့်ဆိုင်းပါစေပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့စံပြ Steroid တစ်မျိုးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအလှဆုံးထုတ်ပိုးဒီဇိုင်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အတွက်ဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရမပြုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူကထိခိုက်ပျက်စီးမှုမဆိုပုံစံကနေပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်သင့်သည်။
အခြားသူတွေရဲ့အရွယ်အစား, ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်အလေးချိန်၏အကွာအဝေးအညီကောက်ခံစဉ်တချို့ကပေးသွင်းအခမဲ့ကုန်ကျစရိတ်ရေကြောင်းကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါကြောင့်မည်သည့်အရာ၌ဝှက်ထားသောကုန်ကျစရိတ်ကိုရှောင်ရှားရန်သင့်ကုန်ကျနိုင်ကြောင်းဘယ်လောက်ပေါ်မှာရှိသမျှလိုအပ်သောအချက်အလက်များရယူပါ။
တစ်ဦးကခြေရာခံအရေအတွက်ကသင်အဲဒါကိုသင့်ရဲ့ရေကြောင်းလိပ်စာရောက်ရှိယခုအချိန်တွင်စေလွှတ်ခဲ့သည်အခြိနျ မှစ. အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့အထုပ်လိုက်လျှောက်ရန်ခွင့်ပြုမိန့်ပါစေတစ်ချိန်ကပေးကုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောသတင်းအချက်အလက်အဖြစ်ပစ္စည်းများကိုလက်ရှိတည်နေရာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
သတင်းအချက်အလက်ခြေရာခံအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသူတစ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသင်အထုပ်ကိုသင်ရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုပိုပြီးယုံကြည်မှုပေးသည်။ အခြားသူများကအဖြစ်ဝေးပေးပို့ဖန်ဆင်းမီသင်ဓာတ်ပုံများ package ပေးပို့ခြင်းအဖြစ်သွားပါ။ ဒါဟာအစငျသညျကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကြောင့်မခံမယူကြဘူးအမှု၌အရှုံးကနေသင်တို့ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ တစ်ဦးပေးသွင်းနှင့်အတူလုပ်ဆောင်ခြုံငုံပိုကောင်းတဲ့ဝယ်အတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်းကိုသင်စေတယ်။
ယနေ့ Bitcoin နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးပိုပြီးလူကြိုက်များလာပြီနေကြသည်။ သူတို့သည်သင့်အမည်ဝှက်ဆပ်ဖို့ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကအများကြီးအားသာချက်အတူပါလာ။ သူတို့အလိုအလြောကျအရောင်းအမှတ်တမ်းတင်ပါဘူးကတည်းကသင်ပိုမို privacy ကိုပျော်မွေ့ရ။
အခြားသူများကို updated ရအချိန်ပိုမိုယူနေချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့သောငွေသားအဖြစ်တချို့ကငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များအခြားသူများထက်ပိုပြီးအန္တရာယ်ရှိ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ထိုနေ့တွင်လုပ်ခံရဖို့ထုတ်ကုန်များဖြန့်ဝေရန်လိုအပ်ပါသည်အမှု၌သင်၏လုပ်ငန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာငွေပေးချေမှုနှင့်အချက်အလက်လိမ်လည်မှုလျော့နည်းအန္တရာယ်ရှိသည်သောငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာပေးရန်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ခရက်ဒစ်ကတ်များနှင့်တူအခြားသူများကိုမကြာခဏဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေကောက်ခံ။ သငျသညျနည်းပါးလာငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ်ရှိသည်သောငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များအဘို့အရွေးချယ်နိုင်ဘူး။ ဒါဟာသင်အကောင်းဆုံးကိုသင်ကိုက်ညီသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း select လုပ်သင့်ကြောင်းဤကဲ့သို့သောအကြောင်းပြချက်အဘို့ဖြစ်၏။
သငျသညျအကောင်းဆုံးသင်တို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်အဘယ်အရာကိုရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုစသည်တို့ကိုသင် Western Union, MoneyGram နဲ့တူအမျိုးမျိုးသောငွေပေးချေမှု option များကိုလည်းကမ်းလှမ်းထားသူတစ်ဦးပေးသွင်းများအတွက် Bitcoin အခြေချကြောင်းသေချာပါစေ, ဘဏ်ငွေလွှဲ။
အဆိုပါကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရဲ့ homepage တွင်သင်သည်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းတန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်အများကြီးရှိပါတယ်။ တစ်ဦးက legit ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဖုံးကွယ်ဖို့ဘာမျှရှိပြီးအများဆုံးဖြစ်ကောင်းသင်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်အများကြီးကိုပေးမည် ကိုယ်တို့အကြောင်း စာမျက်နှာ။ အလုပ်န်ထမ်းများ၏အရေအတွက်, စက်ရုံနဲ့လုပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ၏အရွယ်အစားအဘို့အစစ်ဆေးပါ။
တစ်ဦးကအတုကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူဆိုလိုအမြဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကသင်ဝယ် button ကိုဝင်တိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီခေတ္တရပ်တန့်ပြီးလုပ်သင့်ကြောင်းအနီရောင်အလံဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစတီရွိုက်အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများကိုသင်အချိန်ကိုကယ်တင်နိုင်လိုက်တာရှည်ပုံရသည်ဖြစ်နိုင်သည်နေစဉ်။ shortcuts တွေကိုယူပြီးသို့မဟုတ်ဖြတ်-down အရည်အသွေးကို steroids များအတွက်ခိုင်မာသောဂုဏ်သတင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားတိုးမြှင့်အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစံချိန်စံညွှန်းများတွေ့ဆုံ၏စည်းကမ်းချက်များ၌သင်တို့ကိုအများကြီးကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။
တဦးတည်းအကဲဖြတ်ခြေလှမ်းလျစ်လျူရှုထားမယ့်အနိမ့်စွမ်းဆောင်ရည်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းမှုအတွက်ဖြေရှင်းသို့သငျသညျဆင်းသက်နိုင်ပါတယ်။ ကဲ့သို့သော, etc, ဆင်းရဲသောညှိနှိုင်း, အရည်အသွေးနိမ့်ပစ္စည်းများ, ညံ့စာရွက်စာတမ်း, ထောက်ပံ့ရေး၏နှောင့်အယှက်, ချွတ်ယွင်းဖြစ်ဖွယ်ရှိလည်းမရှိသင့်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့သည်ကိစ္စရပ်များအရည်အသွေး, စျေးနှုန်း, နှင့်ထောက်ပံ့ရေးအချိန်ဇယားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောအခါစီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်နေကြသည်။ မသာပါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သန်မှုသေချာပေမယ့်လည်းအဆုံးအသုံးပြုသူများသည်ကိုသင်ရောင်းသောစတီရွိုက်အတွက်ပိုပြီးယုံကြည်မှုပေးသည်ပါလိမ့်မယ်။
လက်ျာဘက်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရွေးချယ်ခြင်း, သင်ကစိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့ဝယ်အတွေ့အကြုံကိုပေးနှငျ့သငျလှနျးအကောငျးဆုံး steroids get ကူညီပေးပါမည်။
ပေးသွင်းရွေးချယ်ရေး, ဝယ်ယူထူးချွန်စီးရီး, PT ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း, 1998, စာမျက်နှာ 1-154
E-HR: သင့်ပြည်သူ့များ၏ထိရောက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အင်ထရာနက် -Using, စာမျက်နှာ 185
ပေးသွင်း Matters ဒေါက်တာ Aditva Verma
1794 Views စာ
Boldenone Undecylenate: 8 Equipoise ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုကိုသင်ရှောင်ကြဉ်စေချင်ပါလိမ့်မယ်	2019 ခြေလှမ်းများအတွက် testosterone ဟော်မုန်း enanthate Homebrew စေရန်မည်သို့ 6